Akananxa kodwa akezuyincenga iSundowns uLaffor - Impempe
Akananxa kodwa akezuyincenga iSundowns uLaffor
U-Anthony Laffor noMokhele Maloisane
Yize enezinkumbulo eziningi ezinhle ngesikhathi asichitha kwiMamelodi Sundowns, u-Anthony Laffor uthi ngeke ayenzele umusa, futhi uma livela ithuba lokushaya igoli, uzoyibhakizisa ngokuziqhenya inethi.
ILaffor ushiye kwiSundowns ekupheleni kwesizini edlule ngemuva kokuba inkontileka yakhe ingavuselelwanga, kanti usayine kwiChippa United ngoJanuwari.
Cishe uzobe eseqenjini elizoqala umdlalo uma iChilli Boys seyibhekene neMasandawana emdlalweni weDStv Premiership ngoMsombuluko ntambama eSisa Dukashe Stadium, eMdantsane.
“Sengike ngaba kulesi simo phambilini ngesikhathi ngishiya kwiSuperSport United ngiya kwiSundowns,” kusho uLaffor.
“Kade ngithola imilayezo evela kozakwethu kwiSundowns ngabalandeli bayo bonke bangifisela okuhle, bathi ngidlale ngokuzimisela, ngingazithanbisi.”
“Ngingumdlali ngokomsebenzi futhi manje sengihola kwiChippa ngakho uma ngingalithola ithuba, ngizoyibhakuzisa inethi, uma kuvela elokwakhela ozakwethu ithuba, ngizokwenza njalo ngoba ukuzikhandla yikho okuzosisiza.
“Basanda kuhlulwa ngakho bazofika kithi becasukile befuna abantu abazokhiphela kubo isibhongo, ngakho kuzomele siqaphe bese nathi sibe nendlela yokubamangaza,” kuchaza uLaffor.
IChippa iya kulo mdlalo nje isesimweni esibi kwiligi futhi iyakudinga ukuwina ukuze iqhele ezembeni. Uma ingawina, iChippa ingagxuma yeqe iTshakhuma Tsha Madzivhandila, iye endaweni ka-14, bese ilingana ngamaphuzu neMaritzburg United engenhla kwayo ngenxa yesibalo esingcono samagoli.
ISundonws yona izobe isophe ukunweba igebe ezihola ngalo phambili njengoba AmaZulu eseqala ukuyihlala entanyeni nje. Okwamanje iphambili ngamaphuzu amathathu.
Nokho isele emuva ngemidlalo emithathu Osuthwini neGolden Arrows abasendaweni yesibili neyesithathu.
Previous Previous post: Ujabule ngomphumela, kodwa ubefuna amagoli amaningi oweSwallows
Next Next post: Isashosholoza iSundowns, ifake uswazi kwiChippa